musha > Travel Europe > The First Train Trip Ever Made In Italy
Italy ane zvimwe zvinoshamisa chitima nzendo. It ane vanoverengeka nezvitima akanaka uye nemasango nhepfenyuro munyika, asi apo nokusingaperi akanga wokutanga chitima rwendo yakaitwa Itari?
The First Train Trip Ever Made kuItaly – The Beginning
Wekutanga rwendo chitima ndamboita muupenyu Itari introduced railways was when Italy was a divided nyika. Zvakatitorera makore kuti kubatanidza uye kubatanidza iripo njanji mitsetse pashure Italy vakabatana. Mutsara wekutanga wechitima wakavakwa neItaly yaive Naples kuenda kuPortici mutsetse uyo waive mune iyo Humambo hweVaviri Sicilies. The mutsetse yakanga 7.25 makiromita refu. The mutsetse hunosimbiswa pamusoro 3Rd October mu 1839. izvi zvakanga 9 pashure pemakore yokutanga "ano" mutsetse yomukati-guta yakavakwa yaiva Liverpool uye Manchester Railway.
The kwokutanga njanji yaiva miviri njanji uye vakamhanya kubva kuitika nzvimbo Corso Garibaldi kuna Royal Palace in Naples pa Portici. Imba yehumambo akanga mujinga yakakurumbira Mount reVesuvius. Vanhu vokutanga vakaita chitima rwendo kuenda Italy pano, uye mutsetse uyu ikozvino inoumba chikamu Naples-Salerno njanji mutsetse.
The Naples-Salerno njanji mutsetse chikuru njanji rwokuyera Italian njanji Network today and has a place in The First Train Trip Ever Made in Italy. Anoumba munhu link huru hunde mutsetse kuna Southern Italy. The mutsetse wokutanga kiromita ndiyo yokutanga njanji mutsetse. zvino vanhu vanoshandisa chitima mumwe kupfuura anozivikanwa dzokugara, a famous coastal town called Amalfi in the region of Campania. Zviri zvinoshamisa romumhenderekedzo yegungwa taundi. Zviri yakachengeteka kutaura kuti chitima rwendo kuti ikoko pamwe nemhenderekedzo iri zvikuru chete. Funga mechanical mvura, jecha jena uye akasvibirira greenery mune uye pakati dzimwe yakanaka akwegura uye itsva mapurani. Uchava munzira yako kufungidzira kwako chitima rwendo kubva Naples kuenda Salerno, apo iwe Achabva kubata bhazi kana wako zvimwe nzira dzakarongwa pakufamba kupinda Amalfi.
Saka chii chakaitika kune Naples-Portici mutsetse? The rorusununguko Agriculture of yunivhesiti pamusoro Naples Federico II Nde achiputa mutsetse uyu nokuda kwayo nyore kuwana Gomo reVesuvius. Wokutanga chitima rwendo nzira muItaly kuchiripo nhasi.
Njanji dzekutanga muItaly dzakaverengera nzira ye ramangwana rekufamba kwechitima Munyika. Vamwe yakaisvonaka chitima nzendo vari pano. Ndichitarira shure pazuva rokutanga muchitima rwendo ndamboita kuItaly, tinogona kuva nechokwadi chokuti kunyange zvakawanda zvachinja. The girl yakaramba sezvaakanga dzevakawanda zvino sezvo iye zvino.
So now that you learned about The First Train Trip Ever Made in Italy, are you thinking of Mugshot A Train Ticket for a European train trip? Wadii kutora 3 maminitsi yedu yepaIndaneti kuwana yakachipa pashiri matikiti kuti nzira dzenyu. Login yedu yepaIndaneti zvino Book Zvitima.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-first-train-trip-ever-made-in-italy/ - (Mupumburu pasi kuona Embed.
Train Travel chitima rwendo travelitaly